Fehiloha kavina - mijoro, jabot, trongana, Irlandey, Vologda, kiraro bryugsky, kavina frantsay lace
Kofehy fitaratra - 28 sarina kofehy tsara tarehy ho an'ny tsirony rehetra
Ny kavina vita amin'ny kofehy dia manome lohahevitra iray avy ao amin'ny efitra fatoran'ny firaisana ara-nofo tsy mendrika. Ankehitriny dia hita any amin'ny akanjo, akanjony , karazam-bolo maro, ary na dia ny sasany amin'ireo modely aza. Ireo mpahaikanto ny lamaody indrindra dia mankasitraka ity antsipirihany ity ho an'ny vehivavy sy ny ati-doha.
Mba hamoronana firazanana tsara tarehy, ny stylists sy ny mpanamboatra dia mampiasa ny karazana lasibatra fantatra rehetra. Ao amin'ny modely maodely amin'ny akanjo, akanjo, akanjo ary mason-koditra, azo alaina na faranana. Ny safidy farany dia tena mahasambatra, satria azo ampiasaina ao anaty antokon'olona samihafa. Ankoatra izany, ny kofehy vita amin'ny dantelina dia afaka manova avy hatrany ny sary rehetra, mahatonga azy ho fety sy kanto.
Collars - dantelina any Irlandy
Ny kavina mahazendana, ny karaoty irlandey, dia malaza manerana an'izao tontolo izao noho ny fahavitrihana sy ny fahasarotan'ny rafitra tany am-piandohana. Vita amin'ny tanana izy ireo, noho izany dia afaka mividy mora dia mora, na izany aza, ny vidin'ny vokatra toy izany dia azo hamarinina tanteraka - izy ireo dia tena mahavariana sy mahatalanjona. Ny kavina tsara tarehy tsara tarehy, noforonin'ny teknolojia irlandey, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia ny fampiasana fanjaitra vita amin'ny garona tsara indrindra - muslin.
Safidy tsotra sy sarobidy kokoa no noforonin'ny crocheting amin'ny lambam-pandriana, kodiarana na seha-matavy. Irlandey no nampiasa fomba isan-karazany tamin'ny asany, ny malaza indrindra amin'izy ireo dia ny famoronana sary telo mitovy amin'ny ravina sy voninkazo. Ity karazam-bolo ity dia malaza ary mbola ampiasaina matetika amin'ny fampiroboroboana angom-pahefana, fantsom-panafody ary antsipirihany amin'ny fitafin'ny vehivavy.
Collars - kiraro bryugge
Ny kiraro brigouée malaza, ny tendron-pirahalahiana izay manintona fotsiny, dia eo amin'ny tampon'ny laza. Ity sary hosodoko ity dia manahaka ny dian-tady misy kofehy vita amin'ny labozia. Na dia izany aza, mora kokoa ny manao an'io karazam-pitaovana io - ao anatin'izany ny kofehy vita amin'ny kofehy, ary ny tsindrin-tsakafo sy ny bozaka dia mamorona lamina miavaka. Koa satria malaza be ny crochet amin'izao fotoana izao, maro ireo kiraroy marobe no manao zavatra toy izany, ka mahazo fitaovana tsy manam-paharoa sy miavaka.
Araka ny hevitr'ireo ankizivavy maro dia sahiran-tsaina sy ara-dalàna loatra ny tendron-kiraro avy ao Vologda. Ho azy ireo, ny rongony dia ampiasaina, miboridana na masiaka, noho izany dia manana fotony somary maitso sy mafy izy ireo. Na izany aza, ny famolavolàna vehivavy avy amin'io fitaovana io dia mameno tsara ny fifehezan'ny akanjo sy ny akanjon'olon -tsotra.
Teknolojia Frantsay malaza dia ahafahanao mahazo ny ankamantatra vehivavy sy am-pitiavana indrindra. Anatin'ireo rehetra natolotry ny stylist amin'ny varotra, ny famolahana kofehy frantsay dia nozaraina an-kisendrasendra - dia mahafinaritra fotsiny ny mijery azy ary mibontsina amin'ny toerana mientanentana sy mijery ny mombamomba azy. Avy amin'io ampahany amin'ny akanjo io, ny fanahy vintana dia mitsoka, noho izany ny kofehy frantsay ny dantelina amin'ny akanjo na blouse dia tsara indrindra amin'ny fomba retro.
Kavina tsara tarehy
Amin'izao andro izao, manana karazany maro karazana ny tendron-kavoana vavy. Mety misy tery na malalaka, na raisina na ambany, maotina ary laconic, na mahavariana ary mahafa-po. Ny endrika ivelany henjana sy ara-dalàna dia modely matevina amin'ny fotony, fa ny kavin'akanjo mainty kosa dia mamorona manodidina ny tompony ny rivodoza iray mahafinaritra sy manetriketrika kokoa. Ankoatra izany, ny stylista maoderina dia manolotra fitaovana mitovy, vita amin'ny loko hafa.
Fehiloha vita amin'ny dantelina
Ny satroka misy kavina malefaka dia mety ho avo na ambany. Ny safidy voalohany dia toa mahavariana sy azo itokisana, na izany aza, noho ny fisehony mitafy dia tsy misy afa-tsy amin'ny hetsika fialan-tsasatra ihany. Raha ny fitsipika, ny antsipiriany toy izany dia azo alaina, napetraka amin'ny akanjo hariva na akanjo marevaka, izay, ankoatra ny zavatra hafa, dia azo atao. Ny kofehy tery-kisoa-kely dia kely, fa ny mifanohitra amin'izany kosa, dia tena mahafatifaty, vehivavy ary amam-pitiavana. Azony atao ny mameno na dia ny akanjo marevaka fotsiny aza, ka mahatonga azy ho mavitrika sy mahafinaritra.
Jiro vita amin'ny dantelina
Tsy dia fahita firy ny akanjo lava amin'ny akanjo lava. Ity antsipiriany ity dia heverina ho iray amin'ireo karazana fifandraisana, na dia toa tsy dia misy mitovy aminy aza izany. Ny jabot amin'ny kofehy dia afaka manana loko samihafa - ny ankizivavy sasany dia maniry fofona kely kely, miorina eo amin'ny faritra eo ambanin'ny mina, ny hafa kosa misafidy vokatra mahavariana miaraka amin'ny volombava marobe izay midina mankany amin'ny tady.
Na izany na tsy izany, ny kavina-jabot dia manantona tanteraka ny famirapiratana sy ny fomba amam-panaon'ny tompony. Ankoatra izany, ity tsipiriany ity dia afaka manitatra ny tratra ary manjary mampitolagaga sy mampikorontana ny faritra bust, izay tombontsoa tsy azo lavina ho an'ny vehivavy maro. Mandritra izany, noho ny antony iray ihany, ny akanjo misy jabot dia tsy asaina ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny "triangina" midika hoe - hampiakatra ny sain'ny hafa amin'ny vatany ambony izany ary hahatonga ny tsy fisian-kolikoly ho marim-pototra kokoa.
Ho an'ny vehivavy tsara tarehy maniry ny hanova ny sarin'izy ireo matetika, ny hatsembohana mitongilana vita amin'ny fitaovana isan-karazany dia tonga lafatra. Ity fitaovana ity dia azo vidiana ao amin'ny boutique na fivarotana iray na tsy miankina, satria tsy mitaky fahaiza-manao manokana izany na zava-niainana mahavelona. Ny famolavolan-koditra vita tamin'ny kiran-tànana vita amin'ny tanan'olona iray dia ho fanampim-panazavana amin'ny fikarakarana fety izay tsy hifanaraka amin'ny vehivavy hafa.
Miakanjo miaraka amin'ny kofehy dantelina
Na dia marihina aza ny antsipirihany sy ny akanjo toy izany amin'ny zavatra samihafa ao amin'ny gara vehivavy, dia mijery azy ireo amin'ny endriny tsara tarehy. Ao anatin'ireo vokatra ireo dia manintona sy manintona ny vehivavy tsara tarehy, ary ny tendron-kavoana amin'ny akanjo dia mampiavaka azy ireo bebe kokoa. Miankina amin'ny halehibiazin'io antsipirihany io, dia azo ahaina amin'ny fety, birao na ny akanjo fitafy - amin'ny lafiny iray ny zavatra toy izany dia hijery tsara sy mahaliana.
Blouse misy kofehy rongony
Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo tendron-tsoratry ny lace manarona ny rantsambatan'ny vehivavy. Ireo vokatra ireo dia mijery tsara tarehy, vehivavy ary kanto, ny vehivavy tsara tarehy dia matetika mifidy azy ireo amin'ny famoronana sary mamy sy isan'andro. Ankoatra izany, matetika ny stylist dia mampiasa fehiloha fingotra amin'ny toerana hafa mba hanomezana endrika tahaka izany.
Ohatra, mitovitovy endrika ny akanjo marevaka miaraka amin'ny kofehy vita amin'ny rongony sy ny palitao - ny dika mitovy aminy dia mahatonga azy ho mamirapiratra, mamiratra ary maneho hevitra. Ny vokatra toy izany dia mahafinaritra amin'ny aloky ny loko ary lasa fomba tsara hafa amin'ny akanjo hariva miaraka amin'ny pataloha na pensilihazo pensilihazo.
Kofehy amin'ny kofehy
Araka ny hevitr'ireo ankizivavy maro, somary somary hafahafa ny panty-kiraro. Na dia izany aza, ity zavatra kely ity dia tena malaza eo amin'ny firaisana ara-nofo, satria ao anatin'izany ianao dia afaka mahatsapa ho toy ny tena vehivavy. Na ny sary tsotra indrindra isan'andro, naorina noho ity singa ity, dia lasa mahaliana, mamiratra ary manintona.
Ny pantalôty dia tsy voatery mihosotra amin'ny kofehy vita amin'ny dantelina amin'ny tonon'ny zavatra fototra. Mifanohitra amin'izany, ny endriky ny endriny dia mahaliana kokoa amin'ny tsikombakomba tsy mahazatra. Noho izany, ohatra, ny tendron'ny loko matevina dia hikolokolo amin'ny loko mamirapiratra mamirapiratra - mena, mavo mena midorehitra, manga, mainty ary hafa. Ny mainty hoditra dia hijery tsara tarehy mavokely, volomparasy na mainty.
Ity akanjo amin'ny vehivavy ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa. Amin'ny akanjo misy isan'andro, mifanaraka tanteraka amin'ny jeans sy ny pataloha izy ireny, kiraro baskety tsara na moccasins amin'ny tokotany tokana. Ny fanaovana ity zavatra madinidinika ity feno amin'ny akora hoditra vita amin'ny pensilihazo sy kiraro avo loko, afaka mahazo sary mahafinaritra ianao hivoaka na handray anjara amin'ny hetsika tsy ara-potoana.
Jereo ny Emporio Armani
Fitiavana eo ambanin'ny akanjo manga
Toro-lamotra ho an'ny tafo mihantona
Collection Zaps - Spring-Summer 2016
Celery Gluten - mahandro sakafo
Angelina Jolie ao anaty akanjo, ary ankizy ao amin'ny T-shirts: ilay mpilalao sarimihetsika malaza dia nandeha namakivaky ny fivarotan-tsarin'i Malibu
Ahoana ny fomba hisasaran'ny puppy iray hanoratra ao an-trano?
15 tonta tsy mahazatra indrindra eto an-tany
Afangaro ho an'ny ririnina
Vavaka "Andao hitsangana Andriamanitra"
Vitamina ho an'ny zaza 2 taona
Aroma fofona menaka - anarana
Fitsaboana taorian'ny fitondrana vohoka